Sergio Ramos oo fariin u diray jamaahiirta xulka qaranka Spain kadib markii shaqada laga ceeriyay Julen Lopetegui – Gool FM
Sergio Ramos oo fariin u diray jamaahiirta xulka qaranka Spain kadib markii shaqada laga ceeriyay Julen Lopetegui
(Spain) 13 Juunyo 2018. Kabtanka kooxda Real Madrid iyo xulka qaranka Spain Sergio Ramos ayaa wuxuu fariin ugu diray jamaahiirta xulka qaranka Spain bartiisa rasmiga ah ee Twitter-ka, kadib markii shaqada tababara ee xulka qaranka Spain laga ceyriyay tababarihii hore ee Julen Lopetegui.
Xiriirka Kubadda Cagta ee Spain ayaa ku dhawaaqay in shaqada uu ka ceeriyay tababare Julen Lopetegui, kahor hal maalin inta uusan bilaaban koobka aduunka 2018.
Casilaada Julen Lopetegui ayaa waxay timid kadib markii ay Real Madrid ay ku dhawaaqday in uu yahay badalka Zinedine Zidane, laga bilaawo xili ciyaareedka cusub 2018/2019.
Macagacaawista kooxda Los Blancos ee Julen Lopetegui ayaa waxay lama filaan ku noqotay cid kasta, xili sidoo kale ay ka caroodeen talaabada uu Lopetegui qaaday maamulka xiriirka kubada cagta ee dalka Spain.
Si kastaba Sergio Ramos ayaa wuxuu fariin kula wadaagay jamaahiirta xulka qaranka Spain bartiisa Twitter-ka.
“Waxaan nahay xulka qaranka Spain, waxaan u taaganahay inaan matalno sharafta wadanka, sidaas darteed waxaan u baahanahay in si wada jir ah aan halmeel kaga soo jeesano”.
Alisson Becker oo si weyn u amaanay Neymar Jr kahor koobka aduunka 2018